DEG DEG: Ciidammada Kenya Oo isku Xir-Xiray Dad Waayeel ah+Baas Ooda Uga Qaaday, Gobolka Wajeer | Afrikada
DEG DEG: Ciidammada Kenya Oo isku Xir-Xiray Dad Waayeel ah+Baas Ooda Uga Qaaday, Gobolka Wajeer
Jun 21, 2018 - Dhiibo Aragtidaada
Afrikada, Wajeer: Warar la xaqiijiyey oo inaga soo gaaraya gobolka Wajeer ee wadanka Kenya ayaa sheegaya in halkaasi ay howlgal milleteri oo qaas ah ka fuliyeen ciidammo lagu sheegay in ay gaar yihiin.
Ciidankaasi ayaa galay degmada Kutulo iyaga oo halkaasi ka fuliyey dil mid ka mid ahaa ilaalada degaanka, ninkani ayaa ciidammadu markii hore u soo kaxeysteen xerada ciidanka AP-da iyaga oo aan cidna weydiin Baas ooda uga qaaday.
Ninkan la dilay waxaa lagu magacaabey Xasan Cabdi Muxumad waxaana uu ahaa nin oday waayeel ah oo 50 sano. Lama oga sababta si toos ah toogasho saldhigga loogu dhex dilay iyada oo aan la hubsan dembiga uu galay.
Wararka qaar ayaa sheegaya in dad kale ay rabsho kiciyeen markii ninkaasi odayga ah la dilay, waxaa intaa kabacdi dhacday in ay kaceen dadweynihii degaanka kuwaasi oo horey u diidanaa soo xiridda odaygaasi duqa ah. Balse ciidankii ayaa dadkii dhex galay iyaga oo qabqabtay 10-neeyo shacab ah kuna xiray saldhigga. Dhacdadaan ayaa timid ayadoo dhowr maalin ka hor agagaarka Tarbaj oo iyana ka tirsan degmada Wajeer askar jidka loo galay laguna dilay sideed askari oo boolis ahaa kuwo kalena lagu dhaawacay walod kooxaha Al-Shabaab ay sheegeen in tiradu intaasi ka badneyd.
READ MORE: DAAWO: Xasan Daahir Aways Oo Al-Shabaab ku Taageeray Dilkii Xertii Cabdi Weli Ee Gaalkacayo.
Si kastaba ha ahaatee, Ciise Cabdi oo ah wakiilka deegaanka War-gaduud ayaa sheegay in Xasan Cabdi Muxumad uu ahaa waardiye ilaalin jiray xarun ay leedahay KPLC oo Kutulo kutaala. Wuxuu intaasi ku daray in askari isku gadaamtay raggii joogay Kutulo ayna u kaxeysteen xerada ciidammada Kenya ee loo yaqaan AP-da.
Al-Shabaab ayaa sheegatay weerarkii lagu dilay 8-da askari ee booliska ahaa oo u badnaa reer Wajeer oo Axadii lagu laayay agagaarka Tarbaj.
Waxaana dadku isweydiinayaan in ciidammada degaanka loo soo diray ay ahaayeen kuwo careysan oo aan hubsanin ama baaritaan aan ku sameynin cida ay dilka u geysanayaan iyo cida kale.